Flash Image Rotator - Mepụta 3D Image n'usoro Flash
> Resource> Video> Mepụta 3D Image n'usoro n'usoro Flash na Flash Image Rotator
The nkuzi bụ tumadi banyere otú iji flash image rotator ka 3d n'usoro n'usoro flash enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụ flash XML nkà. Ya mere, ihe ị chọrọ bụ a flash image rotator software na ụfọdụ dijitalụ photos. N'ebe a, anyị na-ahọrọ Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe ka 3D image rotator. Download ya nwere free ikpe, na-eso ndị zuru ezu ndu na-eme ka 3D flash n'usoro n'usoro gallery nzọụkwụ site nzọụkwụ.
1 Mbubata gị dijitalụ foto & tinye n'okirikiri
Wụnye 3d flash image rotator mbụ, mgbe ahụ na-agba ya. Ị pụrụ ịhụ na ndị software na-agụnye Gallery na ngosi mmịfe abụọ ụdịdị. Iji mee ka flash adiana 3d mmetụta gallery, i kwesịrị ịhọrọ Gallery mode. Usoro ihe omume ga-aga "ịchọgharị" taabụ ndabara .Pịa "Tinye foto" iwu na bọtịnụ ma ọ bụ nanị ịdọrọ foto storyboard ozugbo na tinye dijitalụ photos. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye n'okirikiri n'ihi na gị 3d n'usoro n'usoro flash, biko pịa "Tinye Music" button. Lee ndị na-esonụ thumbnail iji nweta ya:
2 Họrọ template n'ihi na gị 3D n'usoro n'usoro flash
The flash gallery software enye 30+ free 3D flash foto gallery ndebiri maka gị. Ị nwere ike ịhọrọ mmasị template n'ihi na gị 3d flash. Lee, m na-ahọrọ 3D flash template. Ke adianade do, ị nwekwara ike ịgbakwunye image caption na nkọwa na gị dijitalụ foto site abụọ click on na foto ahụ ma họrọ "Properties" taabụ.
3 Preview na-ebipụta gị 3D n'usoro n'usoro flash
Ugbu a, i zuru ezu iji mee ka oyiyi adiana ke flash, pịa Malite bọtịnụ na ala nke ndị ziri ezi na ihuenyo ka ịhụchalụ arụ ọrụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere afọ ojuju, zọpụta ya na swf, HTML. exe formats, ma ọ bụ i nwere ike zipuru na flash foto gallery ka ndị enyi gị kpọmkwem dị ka a onyinye (lee nri thumbnail). Mgbe ahụ, ịkọrọ gị 3D n'usoro n'usoro flash na-ewu ewu weebụsaịtị
Ntak emi Họrọ Flash Gallery Factory dị ka Your Flash Image Rotator?
Isi nke Flash Gallery Factory
- Karịa 120+ free flash gallery ndebiri, gụnyere 30+ 3d n'usoro n'usoro flash ndebiri
- Full òké interactivity na oyiyi caption / nkọwa ndị dịnụ
- Nkowasi na hyperlinks ike-atụkwasịkwara oyiyi
- Iche iche mmepụta formats gụnyere SWF, HTML, exe, Screensaver ma ọ bụ Email
- Kwado Embed image n'usoro n'usoro flash on website
Otú na-ekiri Netflix on TV